Mobile Friendly နှင့် Mobile တုံ့ပြန်မှုရှိသည့်အီးမေးလ်များ Martech Zone
မိုဘိုင်း Friendly နှင့်မိုဘိုင်းတုံ့ပြန်မှုအီးမေးလ်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါ
သောကြာနေ့, မေလ 17, 2013 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 18, 2015 Douglas Karr
ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်ပတ်သက်။ hounding ခဲ့တာ မိုဘိုင်း - ဖော်ရွေအီးမေးလ်များ နောက်တဖန်သင်တို့သည်နားမထောင်၊ မိုဘိုင်းအီးမေးလ်ကိုဖတ်ရှုသူ stats တကယ်ပေါက်ကွဲနေတယ် ကျော်လွန် desktop desktop အီးမေးလ်ကိုဖတ်ပါ.
ဘာလို့မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးရန်သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ပုံစံကိုအဘယ်ကြောင့်မွမ်းမံထားသနည်း။ အဘယ်သူမျှမဆင်ခြေရှေးရှေး, အီးမေးလ်ဘုန်းကြီးများယခုဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုထောက်ပံ့နေသည် သင်၏ဒီဇိုင်နာအား Photoshop ဖိုင်ဖြင့်ပို့ပေးနိုင်သည့်အပြင်မိုဘိုင်းပစ္စည်းပေါ်တွင်ကြည့်ကောင်းသည့်တုန့်ပြန်မှုရှိသည့်အီးမေးလ်ဒီဇိုင်းကိုသူတို့တည်ဆောက်ရာတွင်ကြီးမားသောအလုပ်ကိုလုပ်လိမ့်မည်။ သင်တ ဦး တည်းလိုအပ်သည်ကိုမယုံကြည်နိုင်သေးပါသလော။ ဒီနေရာမှာသူတို့ရဲ့ infographic (အပြန်အလှန်ဗားရှင်းအတွက်ကလစ်နှိပ်ပါ):
Tags: အီးမေးလ်ဘုန်းကြီးမိုဘိုင်းအီးမေးလ်မိုဘိုင်းတုံ့ပြန်မှုအီးမေးလ်များမိုဘိုင်း - ဖော်ရွေအီးမေးလ်တုံ့ပြန်မှုအီးမေးလ်များ
မှတ်ချက်များကိုသင်၏ Youtube ဗီဒီယိုတွင်ထည့်ပါ
မေလ 20, 2013 မှာ 7: 53 AM
အချက်အလက်ကောင်း ဒါပေမယ့် ဘယ်ဘက်လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါး ပုတ်ခတ်ခံရဖူးလား??? oO
မေလ 20, 2013 မှာ 1: 24 pm တွင်
ဘယ်လက်ကို ဘယ်မှာ လွတ်သွားတာလဲ။
မေလ 21, 2013 မှာ 9: 24 AM
ရဟန်းသည် ညာဘက်လက်ကို အောက်ခြေမှ ဆန့်ထုတ်လိုက်သော်လည်း လက်မသည် လက်တစ်ဖက်က မှားနေသည် သို့မဟုတ် လက်သည် ဘယ်ဘက်လက်မဟုတ်၊ 🙂
မေလ 21, 2013 မှာ 10: 16 AM
အိုး! အဲဒါကိုတောင် သတိမထားမိဘူး။